Yakanakisa Vharidzi Deaerator ine Yakakwira Hunhu Kugadzira uye Fekitori Taiyi
Muenzaniso TY / ZCQ240 TY / ZCQ270 TY / ZCQ300 TY / ZCQ360
Tangi Dhayamita 700mm 800mm 900mm 1000mm
Processing Chinzvimbo 240m³ / h 270m³ / h 300m³ / h 360m³ / h
Kufambisa Ratio 1.68 1.72
Kugadzira Degassing ≥95%
Main mota Simba 15kw 22kw 30kw 37kw
Vacuum Pump Simba 2.2kw 3kw 4kw 7.5kw
Impeller Kumhanya 860r / min 870r / min 876r / min 880r / min
Ex Kumaka ExdIIBt4
Saizi 1750 * 860 * 1500mm 2000 * 1000 * 1670mm 2250 * 1330 * 1650mm 2400 * 1500 * 1850mm
Kukweva kwepombi yepombi kunoshandiswa kuita kuti madhaka apinde mutangi rekutsvaira, uye gasi rinosvirwa kunze kwetangi rekuchenesa nekuishandisa. Pombi yekutsvaira inoita maviri akasiyana mabasa pano.
Iyo pombi yemvura inovhara pombi inogara iri mune isothermal mamiriro panguva yekushanda, yakakodzera kukweva kweinopisa uye inoputika gasi, uye ine yakavimbika kuchengetedzwa kuita.
Iyo madhaka inopfurwa kumadziro mana nekumhanya kwakanyanya kuburikidza nepahwindo rerotor, mabhuru ari mumatope akatyoka zvachose, uye iyo degassing mhedzisiro yakanaka.
Iyo huru mota inorerekera uye iyo nzvimbo yegiravhiti yemuchina wese inoderedzwa.
Iyo bhanhire dhiraivha inogamuchirwa kudzivirira kunetseka kweiyo yekudzora mashandiro.
Iko kuiswa kweanoparadzanisa hwemvura-mvura hakuiti kuti mvura nemhepo zvibudiswe panguva imwe chete, kuitira kuti pombi yekuzadza igare isina kuvhurwa. Uye zvakare, inogona zvakare kutenderedza mvura kupombi yekuchenesa, ichichengetedza mvura.
Iyo pombi yekukweva inoiswa mutangi yedhaka uye inogona kushandiswa seanogonesa simba-guru kana madhaka asina kunyudzwa mumhepo.
Iyo yekuchenesa deaerator inoshandisa iyo yekukweva iyo pombi yekutsvaira kugadzira isina kunaka kumanikidza nzvimbo mumatangi emuchina. Pasi pekuita kwekumanikidza kwemhepo, madhaka anopinda mugomba re rotor kuburikidza nepombi yekukweva, ndokuzokandirwa mutangi muprayera patani kubva pahwindo rakakomberedza mugodhi. Rusvingo, nekuda kwekukanganiswa kwevhiri rekuparadzanisa, rinoparadzanisa hura hwemvura kuita matete matete, mabhuru akanyudzwa mumatope akaputsika, uye gasi rinopukunyuka. Iyo gasi inopatsanurwa nekubvutwa kwepombi yepombi uye gasi remvura gasi, uye gasi rakaparadzaniswa kubva pombi yekudzimisa yeparadzanisa Drain kuenda kunzvimbo yakachengeteka, uye madhaka anoburitswa kunze kwetangi nemhepo. Sezvo main mota yatanga kutanga, uye iyo impeller yakabatana nemota iri kutenderera nepamhanyisa, iyo madhaka inogona chete kupinda mutangi kubva paipi yekukweva, uye haizosveredzwa kuburikidza nekubuditsa pombi.
Pashure: Madhaka Anoshambidza Akasanganisa Bu Desander uye Desilter
Zvadaro: Sieving Calcium Carbonate yePetroleum Proppant Ceramsite Sand Vibrating Screen